China onu ogbom Conveyer factory na suppliers | Sofiq
A na-ejikarị ya arụ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ, nkà mmụta banyere kemịl, kemịkalụ, akụrụngwa, ike, igwu ala, na ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Uwe mkpuchi akwa nke ihe atụ BLT bụ ụdị ebumnuche izugbe eji arụ ọrụ.
A na-ejikarị ya arụ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ, nkà mmụta banyere kemịl, kemịkalụ, akụrụngwa, ike, igwu ala, na ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Uwe mkpuchi akwa nke ihe atụ BLT bụ ụdị ebumnuche izugbe eji arụ ọrụ ụgbọ njem. Ejiri ya na njem nke oke ihe gbasasịrị agbasasị ma ọ bụ ibu ibu nke otu-mpempe aka na-emegharịkarị maka ihe nke nnukwu olu, nkọ, oke dị arọ, ogo dị elu na corrosion. Ka ọ dị ugbu a, usoro dịka ịjụ oyi, ihicha, ikpo ọkụ, ihicha na nhazi nwere ike ịme n'oge njem.
Uwe mkpuchi akwa maka akwa ihe eji eme ihe na China
Plywood ikpe, plywood tree, ma ọ bụ dị ka gị pụrụ iche chọrọ.
Enwere ike ịwaa igwe. Nke a ga - enyere anyị aka belata oghere njem.
Anyị ga-eme ndokwa kasị adaba na ngwugwu na iga ụzọ.
Oge Mbuga ozi 30 ụbọchị nnata nke nkwụnye ego
Onye na-ebu ihe eji ebu ugbo bụ ụdị nke na-ebufe efere. Ọ bụ akụrụngwa nhazi ma ọ bụ na-aga n'ihu mmepụta usoro akụrụngwa.
Onye na-ebu ya n'ogologo nwere ike iru mita 40-80.
Tinye n'ọrụ ubi
Onye na-ebu ihe dị n’ime ala bụ onye na-ebu ala, ọ nwere ike ịdị larịị, tilt t direction nke ihe na-ebugharị ya. Ngwa ahia na-enyefe ihe maka ihe ndọtị efere, ọ bụghị naanị ike nke nnukwu, arụmọrụ dị elu, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya。
O adabara maka inyefe ngọngọ, urughuru na ntụ ntụ.Ọ nwekwara ike iji ya ibufe ihe dị nkọ ma na-ekpo ọkụ.
1) Sample Ọdịdị, relible ọrụ, longlife adịru, mfe echichi ịnọgide na-enwe.
2) Ogologo njem nwere ike iru mita 80.
3) Nwere ike nweta ihe ebu kwụ ma ọ bụ ọchịchọ.
N'iji ya tụnyere ihe atụ BLT, Apron Conveyer nke ihe atụ JYB kwesịrị ekwesị maka ibugharị ihe nkedo dị arọ.
Nkọwapụta Onwe Onye Nkwado
Obosara nke onu ogbom (mm)
Hight Of Trough (mm)
Ikwado ugwo nke ugwo (kg)
Max.Inclination ekwe β
Motion Speed ​​(m / min)
Ẹtop Of Chain (mm)
° 25 Celsius
Iwu 0.8-6 Stepless Speed ​​Speed
Nke gara aga: Kwụ Nkedo Machine Squeezing Sand Nkedo flaskless Nkedo Line - kwụ N'ogbe Jolt Afanyekwa Nkedo Machine - Sofiq
Flask akpụzi Machine, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Nkedo Nkedo Flask, Sandbox, Punch Out igwe, Flask Nkedo,